Muddo kordhintii Farmaajo maxaan ka baranay? | KEYDMEDIA ONLINE
Muddo kordhintii Farmaajo maxaan ka baranay?
12 -kii Feberaayo ayey ahayd markii xildhibaano daacad u ah Farmaajo ay u ololeeyeen in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda sida Baarlamanka, Xukuumadda iyo Madaxtooyada! Ugu dambeyntiina ay ku dhawaaqeen muddo kordhin laba sano ah!
MUQDISHO, Soomaaliya - Isku daygii muddo kordhinta loogu sameeyay hay'adaha dowladda ee uu gadaal ka riixayay madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Farmaajo ayaa ugu dambeyntii guul darreystay kaddib markii diidmo qayaxan ay kala hor yimaadee qeybahan hoos ku xusan:
Shacabka oo bannaan-bax ku muujiyay dareenkooda.
Ciidamadii milatariga ee ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka gobolka Shabeelaha dhexe oo soo banneeyay fariisimaha.
Midowga musharaxiinta oo baaqyo kala duwan diray.
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo xillli hore iska diiday arrinta muddo kordhinta.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare BJFS oo bayaan cad uga hor yimid muddo kororsiga.
Beesha Caalamka oo digniino iyo baaqyo is-daba joog ah soo dirtay tan iyo markii muddo kororsiga lagu dhawaaqay.
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyadii taageeray muddo kororsiga oo dib uga laabtay.
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Rooble oo isna diiday.
iyo ugu dambeyn dagaallo qaraar oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo sabab u ahaa muddo kororsiga.
Qodobadaas isbiirsaday dartood ayey sabab unoqotay in muddo kordhintii halka aqal uu sameeyay laga laabto, waxaana meesha ka baxay hamigii Farmaajo ee ahaa in muddo laba sano oo kale uu xafiiska sii joogi doono, isagoo wareysi uu bixiyay muddo kororsiga kaddib uu si cad u sheegay in aan laga laaban doonin muddo kordhinta ay ku dhawaaqeen Golaha Shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa muddo kordhintii markuu ka laabanayay wuxuu ku daray in awoodii ciidanka iyo arrimaha doorashada uu ku wareejiyay RW Rooble, taasina waxaa sababay culeyska ka dhashay go'aankii 12 -ka April ee muddada loogu kordhiyay madaxtooyada, golaha shacabka iyo xukuumadda RW Rooble.
Casharka kaliya ee laga baran karo muddo kordhinta iyo ficilladii ka dambeeyay waxay tahay in uusan jiri doonin mas'uul dambe oo soo fariista xafiiska Villa Somalia inuusan ku fakarin mar dambe in uu muddo kordhin iyo madax adeeg isku darsan, waxaana mas'uul kasta ee xafiiska soo maamula uu ku qasbanaan doonaa inuu ka shaqeeyo doorasho heshiis lagu yahay!
Cududda ciidamadii kasoo hor jeestay muddo kororsiga ayey dad badani maanta ku kala qaadeen indhaha markii sagootin loogu sameynayay duleedka magaalada Muqdisho halkaasoo xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka BJFS ay kula dardaarmeen, waxaana ciidamadaasi ay aqbaleen in ay dib ugu laabtaan aagaggii dagaalka ee ay soo banneeyeen!